Doonis - Wikipedia
Doonis (Af Ingiriis : ask for hand in marriage) waa xaflada ugu horeeysa tallaabooyinka guurka wakhtigaasi oo caruuska iyo qooyskiisu codsadaan in la siiyo gabadha arooska ee midowga labo qof ku galayaan guurka. Sida caadiga ah, doonistu waxay ka horeeysaa meherka kaasi oo dhacaa ka hor intaaney xaflada iyo damaashaadka wakhtiga ay dhacayso arooska iyo wixii damaashaad iyo farxad ah ee la xidhiidha. Nidaamka iyo dhacdada aroosku waa mid ay ku kala duwan yihiin bulshada caalamku taasi oo ku xidhan dhaqanka, caadada, diinta, wadanka, bulshada iyo heerka darajada dhaqaale ee lamaanaha.
Guurku waa dhacdo ay ku midoobaan labo qof (inta ugu badan ninka iyo naagta) kuwaasi oo hadafkoodu yahay in nolol wadaagaan, tafiirmaan, iyo iska caawiyaan waayaha nolosha. Waa dad kadhaxeeyo isla shaqeen, dhaqaale iyo jaceel. Soomaalida marka ee is guursanaayaan waxaa loo qabtaa buraanbur iyo cayaar. Guurka waa maalin farxad leh, qof walba neh inta oo noolyahay mar uu guursanaa, guurka sidiisa ba waa nolosha biniaadanka. Dhinaca kale, guurku waa midowga lamaane si u sii wadaan jiritaanka aadamaha. Guurku wuxuu ahaa mid soo jireen ah tan ilaa wakhtiyadii ugu horeeyay ilbaxnimada dadka. Dunida maanta waxaa ka jira nidaamyo iyo caadoyin badan kuwaasi oo ku salaysan dhaqanka, dhaqaalaha, wadanada, diinta iyo nolosha.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Doonis&oldid=218288"